Gaaray Longft 55ft Telescopic Carbon Fiber Pole leh Nidaamyada Nadiifinta Cadaadiska Sare
Tiirka nadiifinta ee cadaadiska sare waa mashiin sameeya biyaha cadaadiska sareeya ee ay soo saaraan bamka tuujiya cadaadiska sare si uu u dhaqo dusha sare ee shayga isagoo adeegsanaya qalabka korontada. Way xoqi kartaa wasakhda, way iska dhaqi kartaa, si loo gaaro ujeedka nadiifinta dusha sare ee shayga. Sababtoo ah waa adeegsiga silsiladda biyaha ee cadaadiska sare leh si loo nadiifiyo wasakhda, nadiifinta cadaadiska sarreeya sidoo kale waa mid ka mid ah adduunka loo aqoonsan yahay inay tahay hababka nadaafadda ugu cilmi, dhaqaale iyo bey'adeed ee ugu habboon.
Cadaadiska sare ee tiirarka Kaarboonka kaarboonka u adkeysata Beerta Nadiifinta
12m culus Fiberglass Telescopic Pole nadiifinta cadaadiska sare
3k / 6k / 12k kaarboonka fiilooyinka telescoping ee nadiifinta cadaadiska sare ee tuubada
Noocyo kala duwan oo dusha sare ah, iyada oo la hubinayo tayada wax soo saarka, waxay kordhisaa sharraxaadda ulaha.
Ulahaani si fudud ayey u boodayaan waana la xiri karaa dherer kasta, kuwaas oo ku habboon codsi kasta oo kaydinta isafgaradka iyo dhererka dheer loo baahan yahay.